Ugbo Europe - Osisi Mkpa Mkpa | AromaEasy
Companylọ ọrụ mmanụ dị mkpa
Itolite chamomile nwere ike ịbụ ọrụ siri ike, n'ihi na osisi a nwere mmetụta na-agbanwe maka ọnọdụ ihu igwe. Oke mmiri ozuzo kwa afọ na Hungary dị elu ma na-adịgide kwa mgbe, tinyere ihu igwe kwụ ọtọ. Anyị na-etolite chamomile nke ọma na mpaghara a.
Chamomile yiri sọlfọ nwere ogige edo edo doro anya, ifuru ọcha, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Peoplefọdụ ndị na-ekwu na mmanụ chamomile mkpa isi dị ka apụl. Chamomile nwere chamazulene, nke dị mkpa na ngwa ọgwụgwọ n'ihi ọrụ ya dị egwu nke radieshon. Dị ka daisies, osisi a na-eto na ala ma na-adị naanị 1-2 ụkwụ ogologo.
Anyị na-aghọrọ mkpụrụ nke chamomile obere oge mgbe anyị nwesịrị ahịhịa, wee wepụta mmanụ dị mkpa site na uzuoku ikuku.
Mmanụ Ala A:
Chamomile Mkpa mmanụ
Gịnị kpatara France?
A ma ama na France maka ịkọ ahịhịa dị mma.
Mpaghara a bụ paradaịs maka osisi na-esi ísì ụtọ na-eto eto, ndị bi ebe ahụ na-enwetakwa nnukwu amamihe n’akụkọ ihe na-eto eto. Anwụ na-acha na ala nke mmiri jupụtara na ya mere ka ọnọdụ France na-eto eto dị mma.
Orifọdụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme kwuru na mmepụta lavender nke France nwere ike malite na 600 BC.
Anyị na-ehibe lavender mmanụ dị mkpa na France. Agbanyeghi na AromaEasy nwe ya, ulo oru a bu ulo oru mmanu ndi France nke France choro ma jikwa ya.
Ọkachamara, ndị ọbịa, ndị ọrụ ugbo, na ndị injinia jikọtara nkà na-enweghị ntụ na mgbalị ndị a na-eme iji kwalite mmepe obodo. Oillọ ọrụ mmanụ a dị mkpa na-arụ ọrụ na ihe karịrị 75 lavender ugbo na obere radius dị nso na Provence. Anyị na-eme nke a iji weta lavender si n'ugbo rute n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe na oge, n'ihi na mkpụrụ osisi a ga-edowe anya n’otu ụbọchị owuwe ihe ubi. Anyị na-arụkwa ọrụ mmepụta kwa afọ na naanị izu anọ. N'ime izu ndị a, ndị ọrụ AromaEasy na-arụ ọrụ 4/24 iji nwetakwa mmanụ lavender kacha mma mma.
Ọ bụ ezie na ụcha lavender na-egosipụta nke ọma n'oge mbido ọkọchị, anyị na-egbute ha na July. Ozugbo ekpughere ya maka okpomoku dị elu n’oge ọkọchị, agba ya na-acha odo odo na-amalite ịcha, lavender na-ewetakwa mmanụ nwere oke oke yana oke mma.
N'ime ụlọ ọrụ mmanụ a dị mkpa, anyị na-anwale ogo nke ihe ọkụkụ na mmanụ dị mkpa ndị ọrụ ugbo. Anyị ji igwe chromatography-mass spectrometry gas (GC / MS) rụpụta ụlọ nyocha iji gosipụta na mmanụ dị mkpa.
N’ikwu ya, AromaEasy bụ ụlọ ọrụ mmanụ dị mkpa a tụkwasịrị obi
Ihe mere anyị ji họrọ Bulgaria
A na-akọzi ma na-egbute ata na Bulgaria ihe karịrị narị afọ abụọ. N'ịzụlite ụdị ihe ọkụkụ dị ụtọ maka mmanụ ndị dị mkpa, Bulgaria na-etu ụfọdụ n'ime nyocha mmanụ dị mkpa, mmepe na mmepụta.
N'inwe ihu igwe na-acha na anwụ na ala nwere ájá na -eme ka ọnọdụ zuru oke, Bulgaria abụrụla otu n'ime nnukwu ndị na-emepụta mmanụ tulip dị mkpa n'ụwa.
Ma, olee otu o si arụ ọrụ?
Tulipa Gesneriana bụ ihe anyị họọrọ maka ịkụ na mmịpụta iji nweta mmanụ dị oke mkpa. Anyị na-akụ tulips ọdịda ma na-aghọrọ ha ihe na-esote afọ. Tulips na-ahọrọ aja aja nwere ihu igwe na ihu igwe na ihu igwe dị nro. Anyị na-ewepụta mmanụ dị mkpa site na petals site na ịgbanye mmanụ. Ndị ọrụ AromaEasy na-eburu okooko osisi n'isi ụtụtụ ma mechaa mechie ha n'otu ụbọchị. Ọ dị mkpa iji mee nke a iji nwetakwa mmanụ dị oke ọnụ karị site na mmanụ ala tulip.
Ntọala ụlọ ọrụ a na-enye ọmarịcha nrụpụta akụ na ụba na Bulgaria, na -emepụta ma na-edebe ohere ọrụ na mpaghara a. Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-abịakwute anyị ihe ubi ha. Nke a nwere ike ịbụ metụtara ole na ole ihe, dị ka mgbalị anyị na mma na nkwado, na AromaEasy aha dị ka a ziri ezi na a pụrụ ịdabere asịwo. Anyị na-ewere nke a dịka nsọpụrụ.
Mmanụ Tulip Dị Mkpa | Mmanụ Mkpa Rose